उपत्यकाका यी ७१ ठाउँमा भेटिए कोरोना संक्रमित, तपाई बस्ने क्षेत्र कति सुरक्षित ? – Makalukhabar.com
२०७७ श्रावण २०, मंगलवार २२:३२
उपत्यकाका यी ७१ ठाउँमा भेटिए कोरोना संक्रमित, तपाई बस्ने क्षेत्र कति सुरक्षित ?
मकालु खबर	 Jul 11, 2020 मा प्रकाशित 0
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यका कोरोना सङ्क्रमणको दृष्टिबाट अति उच्च जोखिममा परेको छ । केही समययता जिल्लाबाट आउने तथा विदेशबाट आउनेको संख्यासँगै संक्रमितको संख्या पनि बढेपछि उपत्यका उच्च जोखिममा परेको हो ।
मुलुकका अन्य स्थानमा तुलनात्मक रुपमा नयाँ कोरोना संक्रमितको संख्या घटेपनि काठमाडौं उपत्यकामा भने संक्रमितको संख्या अकासिँदै गएको छ । सुरुका पाँच महिनासम्म यहाँ फाट्टफुट्ट मात्रै संक्रमण पुष्टि भए पनि पछिल्लो एक सातामै संक्रमितको संख्या ९२ बाट तीन गुणा बढेर ३ सय ३८ पुगेको छ ।
शुक्रबारमात्रै उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौंमा २८ जना, ललितपुरमा १३ र भक्तपुरका १ जना गरी ४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । काठमाडौंमा अहिलेसम्म २ सय २४ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने ललितपुरमा ७० र भक्तपुरमा ४४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
उपत्यकाका ७१ ठाउँमा संक्रमण
उपत्यकाका ७१ ठाउँका स्थानीयलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । टेकुस्थित इपिमिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)का अनुसार काठमाडौंमा ४०, ललितपुरमा २३ र भक्तपुरमा ८ ठाउँमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । विदेशबाट फर्केर होटलको क्वारेन्टाइनमा बसेकाको तथ्यांक यसमा समावेश गरिएको छैन ।
उपत्यकाकोरोना संक्रमणउच्च जोखिम
कथाः चुवाको फुल